.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Blog တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ခြင်း
Blog တစ်ခုကို ပြင်ဆင်ခြင်း
မနေ့က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းမလေး သဲပုံက သူ့ဘလော့လေး ပြင်ပေးဖို့ ပြောတယ်။ သူက ခုမှ လုပ်ထားလို့
ပြင်နည်း မသိတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြင်နည်း ရေးထားလား မေးသေးတယ်။ ရေးလက်စက အပြီးမသတ်သေးလို့
ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Blogger Theme တွေထဲကပဲ ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှတာလေး တစ်ခုကို ရွေးပြီးတော့
လိုအပ်တာလေးတွေ လိုက်ပြင်၊ 99counters နဲ့ Cbox ၂ ခု ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကြိုက်မယ်လို့တော့ ထင်တာပဲ..
မူရင်း Template ပုံစံ
ဒါတော့ ပြင်ပြီးပုံ ဖြစ်ပါတယ်..။
Visit >> http://poemgarland.blogspot.com
အကောင်းဆုံး မဟုတ်ပေမယ့် တတ်သလောက်တော့ လုပ်ပေးထားပါတယ်..။ ပျော်ရွှင်ပါစေသူငယ်ချင်း..
နောက်နေ့ကျရင်တော့ Blog ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်နည်းလေးတွေ ရေးတင်ပေးသွားပါမည်။ မကြာမီ လာမည်..မျှော်
Posted by Thurainlin at 03:57
Labels: Blog, Help, Template